Akhriso Qisada Wiil Yar Oo Hooyadii Oo War Talefishan Toos Ugu Jirta Xaalad Khajilaad Ah Geyeysiiyey – | Berberatoday.com
Akhriso Qisada Wiil Yar Oo Hooyadii Oo War Talefishan Toos Ugu Jirta Xaalad Khajilaad Ah Geyeysiiyey –
October 2, 2018 - Written by Berbera Today
Washington(Berberatoday.com)-Wiil ay dhashay warfidiyeenadda caanka ah ee Giuliana Rancic ayaa mar keliya dareenka warbaahinta adduunka oo dhan soo jiitay kaddib markii uu si kadis ah u soo galay gudaha istuudyaha talefishanka xilli hawada si toos ah looga daawanayey. Giuliana Rancic ayaa wiilkeeda oo lix sano jir ah u soo kaxaysatay shaqada, xilli ay ku qornayd in ay baahiso wararka talefishanka ay ka tirsan tahay ee E! News habeennimadii bishan sagaalaad ay 20 ahayd. Iyada oo Giuliana iyo warfidiyeenkii shaqada kula jiray oo ahaa Jason Kennedy. Goor Giuliana iyo Jason ay ku guda jiraan jeedinta wararka, gaar ahaan mar ay si toos ah hawada ugu jirtay haweenayda jilaaga filimada ee caanka ah Jennifer Lawrence oo u dhalatay dalka Maraykanka.
Wiilka yar ayaa ka soo kacay halkii ay hooyadii kaga tagtay si uu u sugo inta ay shaqada dhammaynayso. Inta uu gudaha u soo galay Istuudyaha oo uu hor istaagay kamaradaha ayaanu bilaabay qoob ka ciyaar.
Mar keliya ayaa ay Giuliana oo 44 sano jir ahi ku war heshay hadhka dabadeeda maray, markii ay dib u eegtayna waxa ay aragtay wiilkeedii Duke Busting, inta ay kursiga ka carartay ayaa ay ku foorarsatay wiilka oo iska sii watay qoobka ciyaarka iyo ficillo kale oo maaweelo u eeg. “Nabadeey, macaane. Hooyo waa ay shaqaynaysaa,” ayaa ay ku tidhi wiilka, iyada oo haddana inta ay ku soo jeesatay warfidiyeenka barnaamijka la daadihinayey iyo dhegeystayaashaba ka raalli gelisay waxa dhacay.
Mar keliya ayaa uu istuudyuhu isu beddelay goob ay isku baacsadaan Giuliana iyo wiilkeeda oo iyada oo aad u qoslaysa ugu dambayntii ku guulaysatay in ay wiilka bannaanka u saarto kaddib markii ay u ballanqaaday shaaglaydh in ay siinayso. Muuqaal gaaban oo muujinaya wixii ka dhacay Istuudyaha ayaa uu wariye Kennedy ku faafiyey bartiisa twitterka, waxa aanay arrintani noqotay mawduuc xiise yeesha oo ay dad aad u tiro badani faallooyin kala duwan ka bixiyaan.